Dhamaan boggaga internetka, router-yada, & Laptop waxay leeyihiin cinwaanka IP-ga 192.168.8.10. Taasi waa sida kumbuyuutarrada ay si gaar ah iskood ugu aqoonsadaan shabakadda ama shabakadda. Badanaa, router-kaaga ayaa mid u qoondeeya Laptop-ka shabakad maxalli ah. Sidee bay u xaqiijineysaa in cinwaanka IP-ga ee kombuyuutarka gudaha uusan ahayn midka shabaqa isku mid ka ah? Adeegsiga shakhsi ahaaneed waxaa jira diiwaanno nambarro kala duwan (meherad, goob shaqo, guri ku saleysan, iwm.)
IP Address 192.168.8.10 waa cinwaan IP gaar ah. Cinwaanada gaarka loo leeyahay ee IP-ga ee gudaha ku jira waxaa loo adeegsadaa sida shabakadaha aagga maxalliga ah ee LAN (LAN) & oo aan lagu muujin shabakadda. Cinwaanada gaarka loo leeyahay ee IP-ga waxaa lagu sharaxay RFC (IPv6) 4193 ama RFC (IPv4) 1918.
192.168.8.10 waa IP gaar ah oo loo kaydiyay soo kabashada router admin console. Tani iyo sidoo kale IP-yada kala duwan tusaale 192.168.8.200, 192.168.8.1, 192.168.0.35, iwm ayaa guud ahaan laga aqbalay xeerarka caalamiga ah ee router IP-yada. Qoraallada xitaa waxay cinwaan uga yihiin "Default IP Gateway". Mid kasta oo ka mid ah router-yada isku mid ma aha. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira waxyaabo kale oo u dhexeeya moodeello dhowr ah oo shirkado la mid ah. Ganacsiyadaani sida login IP u isticmaalaan 192.168.8.10.
Cinwaanka 192.168.8.10 IP ee taxanaha 192.168.8.1 illaa 192.168.8.255. Qiyaasta cinwaankan ee loo adeegsaday shabakadaha maxalliga ah ayaa router u kala qaybin doonaa dhammaan aaladaha (kumbuyuutarrada gacanta, I pad, Kombiyuutarka Guriga, Telefoonnada gacanta, iwm.) Si farsamo ahaan ah shabakadda guriga.
The https://192.168.8.10 Cinwaanka IP-ga waxaa ku soo biirtay Maamulka Lambarada Internet-ka ee loo qoondeeyay qayb ahaan xaddidaadda shabakadaha 192.168.8.0/24. Cinwaanada IP-ga ee ku yaal goobta kaliya looma oggola ururo kooban & qof kastaa wuu shaqaalayn karaa cinwaanada IP-ka iyada oo aan loo oggolaan xafiiska diiwaangelinta internetka ee guriga oo lagu calaamadeeyay RFC 1918, oo ka duwan cinwaannada IP-ga ee la wadaago.
IP 192.168.8.1 ilaa 192.168.8.255 way kaladuwantahay meelkasta IP 192.168.8.10 waa qayb IP ah oo gaar u ah oo damaanad qaadaya heerarka horay loogu sii dejiyay RFC 1918. Cinwaanada tusaale ahaan 192.168.8.10 laguma aqoonsan internetka la wadaago. Haddii shabakadda gaarka loo leeyahay ay lagama maarmaan tahay isku xirka internetka, waa inay u isticmaashaa marin ama marin beddel.
Muxuu cinwaanku u eg yahay 192.168.8.10 caadi?
Sida lagula taliyay, cinwaanka IP-ga 192.168.8.10 waa qeyb ka mid ah shabakadaha fasalka C ee gaarka ah. Isku xigxiga shabakadaha noocan oo kale ah waa 192.168.0.0 ilaa 192.168.255.255. Tani waxay ka dhigaysaa wax yar oo ka mid ah cinwaanada IP-ga 65,535. Kordhintan waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa shabakadaha gaarka loo leeyahay maadaama router kala duwan loogu talagalay 192.168.1.1, 192.168.8.1, ama 192.168.0.1, oo ah cinwaanada caadiga ah.
Haddii aad ku xireyso shabakadda taleefanka, ama laptops, kiniiniyada, waxaad helaysaa cinwaan IP ah tusaale ahaan 192.168.8.10 xaaladdan.
Dhammaan router-yada ayaa loo mari karaa biraawsarka. Diiwaan https://192.168.8.10 biraawsarka haddii router-ka cinwaanka IP-ga uu yahay 192.168.8.10. Waxaad ogaan doontaa bogga galitaanka. Badanaa si joogto ah loo isticmaalo PWs & magacyadu waa: "1234" admin ama "nil". Fadlan hubi sababtoo ah diiwaanka router.
Haddii 192.168.8.10 uusan ahayn router IP-ga, waxaad dib ula soo bixi kartaa router IP-ka adoo adeegsanaya amarka Ipconfig. Dib u helida maamulka-shabakadaada, waxaad u isticmaali kartaa hoyga maamulka adoo ku qoraya cinwaanka cinwaanka shabakada shabakada & waad xaqiijin kartaa furaha galitaanka.
Categories cinwaanka IP Post navigation